A LAWYER NGE KUNOKWENZEKA INGOZI
Neengozi ngamanye amaxesha kukhokelela, ulwaphulo-mthetho iimeko, ukuziqhelanisa umthetho iqhele complex amatyala. Umqhubi abo violated traffic imigaqo (traffic Imigaqo) kwaye harming impilo ngomnye umntu rhoqo inika readings ukuba ziyahluka kolu ubungqina amangqina. Kwaye akusoloko iyenzeka intentionally. Shock abathatha inxaxheba kwi-lezothutho kunokwenzeka ingozi yenza nzima kakhulu uhlalutyo lomgaqo-iimeko kunjalo, kwaye ukuba siganeko inokuba nesiphumo, ulwaphulo-mthetho eyimali, tranquility akusebenzi yongeza nabani na.
Ke azinako wakhanyela ukuba abaninzi traffic kunokwenzeka ingozi kunye ezinzima zoko basenokuba kunye mutual ngokubhekiselele abaqhubi umfanekiso kwaye abahambi ngeenyawo. Kodwa kukho injongo izizathu akakwazi ukunqanda ungquzulwano, umzekelo, enzima ukungaphumeleli okanye amahlwempu ukubonakala kwi ezindleleni.
Kumele ibe ukuyinyamezela khumbula ukuba ezikhoyo lawyer kakhulu ibalulekile na isemthethweni iingxoxo. Amalungelo akho kwimeko neengozi unako uninzi ngempumelelo ikhuselwe yi-lamagqwetha kunye namava kule ndawo, umthetho. Nangona kunjalo, ukuba unayo akukho malunga nenkqubo yolawulo olumanyanisiweyo imfuza okanye ixesha ukufumana oko, nkqu Jikelele inkangeleko iya kuba ngaphezulu reliable kwe-geqe azame ukuzikhusela kwi-ithemba comment. Noko uya kwazi ukuba zichaza ukuba ufuna ntoni ukuthetha kwaye yintoni na. Ngamanye amaxesha sele kubalulekile ngokwaneleyo ukuba ilungu lendlu, ulwaphulo-mthetho meko kwi traffic kunokwenzeka ingozi ayikho aggravated imeko yabo.
Hire Elinolwazi Iphepha Writers kuba Eyona, i-Intanethi Umthengi Ngembalelwano